Princess Salon အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（70.7MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Princess Salon: Frozen Party
ဟေး ~ ဒီအေးခဲနေသောဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကိုကြိုဆိုပါတယ်! ဤတွင်မြင့်မြတ်သောမင်းသမီးထံမှဖိတ်ကြားချက်တစ်ခု, အဘယ်ကြောင့်ယခုဖွင့်လှစ်ကြဘူး?
အချိန်ခရီးသွားခြင်း? ကမ္ဘာသစ်လား Aria တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီး 21 ရာစုမှအလယ်ခေတ်သို့လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအင်အားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ မသေချာမရေရာမှုအစပိုင်းတွင်မသေချာမရေရာပြီးနောက်သူမအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားလာခဲ့သည်, အဲဒီမှာ Adventures တွေအများကြီးရှိခြင်းပြီးနောက်သူမနောက်ဆုံးတွင်သူမရဲတိုက်ဟောင်းတစ် ဦး သို့ရောက်သောအခါအလွန်ကြီးမားသော, သူမရဲတိုက်ထဲတံခါးကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ ငါတို့ Aria ဘာဖြစ်သွားတာလဲ, မမေ့နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးအဲဒါကိုသင်ကိုယ်တိုင်ရှာပါ။
ကစားနည်းကိုဖွင့်ပြီးဂိမ်းကိုဖွင့်ပြီး STOR ကိုနှိပ်ပါ။ Hurray ~ ယခုသင်သည်သင်ကံကောင်းသည့်မိန်းကလေး Aria ဖြစ်သည်။ သငျသညျတဆင့်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးခရီးသွားလာနှင့်နောက်ဆုံးတော့ဤလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ရဲတိုက်သို့လာကြ၏။ ဘယ်သူနဲ့တွေ့ဆုံချင်ပါသလဲ မင်းသမီးပဲလို့ထင်တယ် အဲဒီမှာသူမမှာပါ။ ၎င်းမတိုင်မီကသင်သည် SPA ကို ဦး စွာလုပ်ပါ, ဤအသက်အရွယ်၏ spa ပစ္စည်းများကိုစမ်းကြည့်ပါ။ ထို့နောက်သင်မတူဘဲသင်မတူကွဲပြားစွာဝတ်ဆင်ထားသည့်အတိုင်းဂန္ထဝင်နှင့်မြင့်မြတ်သောအဝတ်အစားများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုကြိုးစားကြည့်ပါ, WOO-HOO ~ ပါတီစတင်ခဲ့ပြီး guests ည့်သည်များနှင့်စကားပြောနိုင်ပြီးနက်နဲသောလက်ဆောင်များရရန်အကြံဥာဏ်များကိုလိုက်နာပါ။ ကျေနပ်ရော, ဟမ်? သို့သော်ဤခရီးသွားခြင်းသည်ဤအေးခဲနေသောမြေတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့်ဤခရီးသွားခြင်းအကြောင်းမဟုတ်ပါ။ သင်၏ snowman ကိုထူးခြားစေရန်သင်လိုချင်သောအလှဆင်များမှသင်လိုချင်သောအရာများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ Sweetie, ဒီစိတ်ကူးခရီးသွားလာရေးခရီးသွားခြင်းသည်သင့်အတွက်သာဖြစ်သည်။
အင်္ဂါရပ်များ - - ထိတွေ့မှုအခိုက်အတန့်များနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုချည်နှောင်ခြင်း တော်ဝင်နန်းတော်မှာရှိတဲ့နာမည်ကြီး Libii သည်ကလေးများအတွက်ဆန်းသစ်သောဂိမ်းများကိုဖန်တီးရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိဘများနှင့်သူတို့၏ကလေးများနှင့်ကောင်းသောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီးပျော်ရွှင်သောပျော်ရွှင်သောဝန်းကျင်ကိုတည်ဆောက်ရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေမည်။ : http://www.libiii.com/: http: //www.facebook.com/libiigame
အကြံဥာဏ်များရပြီလား။ အကြံပြုချက်များ? နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုလိုအပ်ပါသလား။ ကျေးဇူးပြု. ကျွန်ုပ်တို့အား [email protected] တွင် 24/7 ကိုဆက်သွယ်ပါ။
သင်သိထားပါ။ ပစ္စည်းများကိုသော့ဖွင့်ရန်ဝယ်ယူရန်နှင့်ငွေပေးချေရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ဤပစ္စည်းများကိုအသုံးမပြုလိုပါကသင်၏ချိန်ညှိချက်များတွင် In-app ဝယ်ယူမှုကိုပိတ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်